people Nepal » आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकाे ११२औं जन्मजयन्ती आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकाे ११२औं जन्मजयन्ती – people Nepal
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकाे ११२औं जन्मजयन्ती
काठमाडाैं, कात्तिक २९ः नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज ११२औँ जन्मजयन्ती । स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीभाषीहरूले देवकाेटाकाे स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी जयन्ती मनाउने गर्छन् ।
महाकवि देवकोटाको विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी (कार्तिक २७ गते) अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौंको डिल्लीबजारमा जन्मिएका थिए । त्यसैले प्रत्येक वर्ष लक्ष्मीपूजाकै दिन उनकाे स्मरण गरिन्छ । यसपाली भने काेराेना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रमविना नै देवकाेटाकाे जयन्ती मनाइन लागेकाे बताइएकाे छ ।
दश वर्षको उमेरबाट साहित्य रचना सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् । नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्तावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृतिप्रेम र समाजसुधारका भाव पाइन्छन् । देवकोटाका साहित्यक रचनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ ।
उनको खण्डकाव्य मुनामदनले नेपालमा धेरै बिक्री भएको साहित्यिक कृतिको रुपमा बनाएको कीर्तिमान अहिलेसम्म तोडिएको छैन ।
देवकोटाको निधन वि. सं. २०१६ भाद्र २९ काठमाडाैंमै भएको हो । उनी नेपाली साहित्यका महाकविका रूपमा सुप्रसिद्ध हुनुका साथै देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका चारवटै विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए ।